व्यङ्ग्य - ज्ञानेन्द्रको छैँया, छैँया........ - Jagaran Post
Jagaran Post १ कार्तिक २०७७, शनिबार १३:१७ कला साहित्य
बिम्मी कालिन्दी शर्मा
आमाले संधै “आँगनीमा छम छमी नाचे श्रीराम” भन्दै भजन गाउनु हुन्थ्यो । अब आमा पनि अर्को लोकमा पुगिसक्नु भो । भगवान श्रीराम पनि साकेत लोकमा गैसके । अब बाँकी आँगन मात्र छ त्यही आँगनमा केही दिन अघि पोखरामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले छमछमी नाचेर देखाइ दिए । ज्ञानेन्द्र शाहले नाच्या मात्र के थिए यो देशको राज्यसत्ता भूईँचालो आए जस्तैगरि हल्लिन थाल्यो । यो देशको गणतान्त्रिक सत्तालाई लाग्यो ज्ञानेन्द्रले नाचेर एकदिन आफु सिह ंदरवार या नारायणहिटी दरवारमा पुन उपस्थिति जनाउने ईशारा गरेका हुन् । ज्ञानेन्द्रले जब, जब कुनै सार्वजनिक समारोहमा केही बोल्छन् वा गर्छन उनलाई “एलियन” जस्तो ठानेर सबैले हेर्न थाल्छन् र अनेक टीका, टिप्पणी गर्न खोज्छन् ।
पूर्व या पश्चिम तिर अस्ताउनु अघि या पछि पनि ज्ञानेन्दशाह यो देशका नागरिक थिए र रहिरहने छन् । तर यो देशको राज्यसत्ता ज्ञानेन्दलाइै नागरिक मान्न तैयार छैन । पूर्वै भए पनि उनी राजा नै हुन् र उनलाई सत्ता खोस्ने षडयन्त्रकारीको रुपमा नै हेर्दछन् यो देशका तमाम नेता नेता तथा कार्यकर्ता । किन ज्ञानेन्द्रले हाछ्ँयू गर्दा पनि सिहं दरवारलाई ज्वरो आउँदछ ? यो देशका अन्य पौने तीन करोड जनता जस्तै ज्ञानेन्दलाई देशाटन र तिर्थाटन गर्ने अधिकार छ । उनीसँग पनि पक्कै नेपालको नागरिकता होला नै तब किन कुनै भारतीय वा विदेशीलाई जस्तो उनको हरेक गतिविधि नियालेर हेरिन्छ ? ज्ञानेन्द्रको हरेक बोली र व्यवहारलाई शँकाको घेरामा किन ल्याइन्छ ?
बुढापाकाहरु भन्छन् धरतिको मूनि नागहरुको वास छ । जब यी नागहरुले आफ्नो जीउ तन्काउँछन या काँचुली फेर्छन तब तब धरतिमा भूकम्प आउँछ रे । के ज्ञानेन्द्र पनि नाग हुन्र उनले नाच्दैमा वा जीउ तन्काउँदैमा देशमा भूँइचालो जाने ? शायद राज्यसत्ताको मानसिकता उनलाई संधै राजाको रुपमा देख्ने र मौन भएर बसेको हेर्न चाहने छ । त्यसैले त जहाँ ज्ञानेन्द्रले केही बोल्नका लागि आफ्नो मुख खोल्छन् यो देशको राज्यसत्तालाई चार सय चालिस भोल्टको करेण्ट लाग्दछ । तब सिहं दरवार रन्थ्नाउँछ र तुरुन्तै उर्दी जारी गर्छ ज्ञानेन्द्रको मुखमा धारा टेप लगाउनु पर्ने । सिहं दरवारभित्र रमाउने र सत्ता र भत्ताको तर चाट्ने बानीपरेका फ्याउराहरुलाई ज्ञानेन्द्र अहिले पनि सुतेका शेर नै हुन जो उठ्यो कि झम्टिहाल्छ । त्यसैले यिनीहरु चाहन्छन् ज्ञानेन्द संधै आफ्नो पिजँडा अर्थात निर्मल निवासभित्रै रहुन् ।
ज्ञानेन्द्रलाई अहिले पनि राजा वा भगवान बिष्णुको अवतार नै मान्छ शायद आम जनमानस र शासनसत्ता दुबै । त्यसैले उनले घुम्दा, केही खाँदा वा नाच्दा सबैलाई अचम्म लाग्छ । शायद भगवानले खाएको र नाचेको नदेखेकाहरुलाई भगवानले नाच्दा वा खाँदा अचम्म माने जस्तै । अझ ज्ञानेन्दले केही उदगार व्यक्त गर्नु पर्दछ त्यसपछि एकथरी यसलाई देवबाणी मानेर स्तुतीगान गर्न थाल्छ भने अर्कोथरी यसमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता पलट गर्न सक्ने गन्ध पाउँछ र यसलाई घोर षडयन्त्र भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध शुरु हुन्छ । ज्ञानेन्दले बोल्यो कि सरकारलाई पोल्यो । शायद ज्ञानेन्द्रलाई पनि सत्ताको यो मानसिकताको राम्रो जानकारी भैसकेको छ त्यसैले उनी पनि बेला, बेलामा आगोमा घीउ हालेर सत्ताको चिसो ज्यानलाई तताइ दिने गर्छन् । आखिरमा यो होमको चरुले उनको हात पोल्ने हैन क्यार ?
निर्मल निवासको अग्लो पर्खालभित्र हुने कुनै पनि गतिविधि या घटना थाहा नपाउने सत्ता जब तिनै ज्ञानेन्द निर्मल निवासबाट निस्केर मुस्काउँछन् या केही बोल्छन् तब उनको मुस्कानमा लठ्ठिदैँ त्यही मुस्कानलाई षडयन्त्रकारीको अभेद्ध मुस्कान ठानेर कुनै दिन ज्ञानेन्दको मुस्कानमा पनि धारा एकसय चौवालिस लगाइन बेर छैन । चिढिने राज्य सत्ता र चिढाउनमा उदार दुबै शायद जुहारी खेल्दैछन् बीचमा सिहं दरवारलाई दाउमा लगाएर । पश्चिमतिर अस्ताइ सकेर पनि अहिलेसम्म पूर्व राजाको मान पदवी पाइरहेका उनै ज्ञानेन्द्र शाहको मनमा कहिलेकाँही पक्कै पनि आउँदो हो फेरि पछाडि फर्कियौं र अढाइ सय वर्ष राज्य गरेको आफ्नो पुर्खाको नासोलाई वर्तमानमा ल्याएर नचाऔं ।
ज्ञानेन्द्रलाई सार्वजनिक जीवनमा आएर कुनै राजनीतिक दल खोलेर जनताबाट आफ्नो मतको अनुमोदन गराउने अधिकार छ । उनलाई कम्बोडियाका नरोद्धम सिहांनुक जस्तै बन्ने अधिकार छ तर तानाशाह बन्ने या ब्रिटेनमा जस्तो फेरि राजतन्त्र फर्किएला र मोज गरुँला भन्ने उनले सोच्नु बेकार हो । हो उनी फेरि राजा बन्ने सपना हेर्न या कल्पना गर्न स्वतन्त्र छन् । सपना हेर्नु या कल्पना गर्नु देशका कुनै पनि नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर त्यो सपना या कल्पनालाई षडयन्त्र गरेर पाउन या हत्याउन खोज्नु अवैधानिक हो । त्यसैले ज्ञानेन्द्रले पोखराको कुनै रिसोर्टमा नाच्दैमा सिहंदरवारको आँगन नै टेढो हुन थालेको देख्नु भनेको आफुलाई सत्ता चलाउने हुती नभएर ज्ञानेन्द्रलाई दोष दिनु जतिकै हो । ज्ञानेन्द्र आफैमा मस्त मगन हुँदै र नाच्दै “छैयाँ छैयाँ” गरिरहुन केही छैन तर जनताले निर्मम सत्ताको क्रुर प्रहारले “अ‍ैया अ‍ैया” गर्नु नपरे हुन्थ्यो बस।
(म राजावादी हैन)
यसपालीको पद्मश्री पुरस्कार सञ्जीव उप्रेतीको ‘हंस’ र साधना